AnyDesk 3.6.3 rezinesi Key 2018 Full Crack for PC & Mac [tsva]
musha » mutswe & Activators » AnyDesk License Key 2018
AnyDesk License Key Software ndiyo munyika uchitsanya akavimbika kupfuura kure pakombiyuta fomu vanoshandisa. Users kuwana zvirongwa zvavo zvose, zvinyorwa, uye mafaira kubva pose, asina kupa umboo yavo gore rebasa. All zvaunofanira kuita kuti yakatanga ndiko kukopa AnyDesk License Key mac pumpkin & yori uye nokuparura 1.1MB chirongwa faira. No kugadzwa kana (network-) configuration kunodiwa. AnyDesk chinoshamisa Remote Desktop chikumbiro kuti anoshandisa itsva vhidhiyo codec inoti nokuda users.Moreover, zviri-chinja, ikwanise lightweight hakuiti kunokanganisa nekubata vanoshandisa PC. The-software AnyDesk License Key anoshandisa TLS1.2 encryption, uye vose kumugumo kubatana vari cryptographically rukasimbiswa.
AnyDesk Mac ndiye Software lightweight chaizvo hazvina kutora nzvimbo zhinji uye compressed kuva 1MB faira, uye hapana kugadzwa kana administrative ropafadzo vanosungirwa. The UI pamusoro AnyDesk zviri nyore uye nyore navigate.With AnyDesk License vanoshandisa Key vanogona kushandisa kombiyuta yavo pachavo kubva pose. Dzavo munhu zvichienderana AnyDesk-ID ndiyo musimboti Desktop kwavo, nomoyo wako mafomu, zvinyorwa, uye mifananidzo. Chikurukuru, rokushandisa date inoramba apo nde- kwavo hard drive kumwe.
AnyDesk 3.6.3 Mutswe ndinoiitawo licence Key run mu inotakurika rudzi kubudikidza default, asi vanokwanisa gadza saizvozvo purogiramu yenguva dzose kana vachida to.During chinoshingaira kure kubatana, wandei Kurongwa zviri nyore kubva Muterere bar.AnyDesk angachinja kubatana kuumba rwemhando Video unhu, havukavu, kana kuubata pakati maviri. Uyezve, Kurongwa tiri customizable zvakafanana vachiratidza kure cursor, achitumira ruzha, akatendeuka kubvisa clipboard syncing, waipedza kuzvidzora nokuti maonero-chete, ichivharira mumwe rokushandisa chiyamuro, Achitora screenshot.Files zvinogona kuchinjwa pamwe AnyDesk kuburikidza nokukopa navo clipboard uye ipapo pasting navo kure kombiyuta.
AnyDesk unoshanda chete Linux, MacOS, Windows 10, Windows 8, Windows 7, uye Windows XP kushanda nehurongwa.
AnyDesk License Key 2017 mutswe Features
Nyore kushandisa ane ushamwari User inowanikwa.
Connection kunotoda zvinogona kuchengetwa kuti Desktop kukurumidza kuwana
Panguva chirongwa, anotonga zvinogona kuitwa pakati kumativi.
Shortcuts of kiibhodhi anogona kutumwa kure kombiyuta, kunyange Ctrl-alt-Del.
The mushandisi Nhoroondo mufananidzo muna Windows achaita kuratidza sezvo kuziviswa kwavo kana kukumbira kubatanidza mumwe kombiyuta.
A pamazita kare kwokubatana anouya pamwe pasi AnyDesk kuti kare hwomukova kwokubatana nyore.
Information pamusoro kure kombiyuta inogona kuonekwa nehurongwa mashoko Tab.
Clipboard mukati zvinogona synced mhiri hondo uye yeGmail.END_STRONG kombiyuta.
Zvakachena uye Hwakarongeka inowanikwa uye vane magiramufomu nzira iripo.
Small Download saizi (pfuurei 1 MB) uye Tinotsigira faira anotamisa.
Anogona kumhanya fullscreen rudzi uye vane Includes chinyorwa dzevakurukuri nezvaanogona.
Tinotsigira kutumira kiibhodhi kunotoda.
Sei mutswe AnyDesk Premium 3.6.3?
Download AnyDesk ruchitsemuka pamwe 2017 rezinesi Key
Gadza AnyDesk regai kurivhura.
Kutevedzera rezenisi faira kuti kugadzwa Directory.
← Kutarisana CertExam Suite 4.3.2 mutswe Adobe Photoshop CC kutsemuka →